Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa qajeelfamni lakk. 7/2013 keyyanni 16(2) akka haqamu murteesse – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBoordiin Filannoo Biyyaaleessaa qajeelfamni lakk. 7/2013 keyyanni 16(2) akka haqamu murteesse
Akkasumas erga kaadhimamani booda wayita filannoo mindaan alatti hayyama akka argatan mirgi seeraan kennameefi jira. Boordichi wayita galmee kaadhimamtootaa raawwataa jirutti qajeelfama lakk. 7/2013 Keeyyata 16(2) walitti qabu fi adda baasu mallatto deeggarsaa galme dorgomtoota kadhimamtootaa jala jiru hiikkaa dabsani fudhachuun naannooleen filanno garagaraa kaadhimatootaa hojjattoota mootummaa sanada mindaa malee itti fudhatan akka dhiheessan gaafatamuusaani hubateera.